I-zodiac yovuko isuka kumhlaza ngenxa ye-libra ukuya kwi-capricorn; i-zodiac yokulala ukusuka kwi-capricorn ukuya kwi-aries ukuya kumhlaza.
Vol. 6 NOVEMBA, 1907. 2
Ilungelo lokushicilela, i-1907, nguHW PERCIVAL.
ISELULEKO yinto eqhelekileyo kangangokuba asifane siqwalasele ukuba yinto engummangaliso kangakanani na okanye le nto ingaqondakaliyo siyidlalayo kubukho bethu. Sichitha malunga nesinye kwisithathu sobomi bethu ekulaleni. Ukuba siphila iminyaka engamashumi amathandathu sichithe iminyaka engamashumi amabini elo xesha silele. Njengabantwana sichithe ngaphezulu kwesinye esithathwini seeyure ezingamashumi amabini anesine silele, kwaye, njengeentsana, silele ngaphezulu kwesiqingatha seentsuku zethu.
Yonke into kuwo onke amasebe kunye nobukumkani bendalo buyalala, kwaye akukho nto iphantsi kwemithetho yendalo enokuyenza ngaphandle kokulala. Indalo ngokwakhe iyalala. Umhlaba, amadoda, izityalo kunye neeminerals, ngokufanayo zifuna ukulala ukuze imisebenzi yazo iqhubeke. Ixesha lokulala lixesha lokuziphumza kwakhe kwimisebenzi yokuvuka kwakhe. Ngexesha lokulala kwendalo ulungisa umonakalo owenziwe kwizidalwa zakhe ngokukhawuleza, kunye nokunxila nobomi.
Asinambulelo wokulala ngenxa yeenzuzo ezinkulu esizifumanayo. Sisoloko sizisola ngexesha esilichitha ekulaleni ngokungathi lichithwe; Nangona, ibingengobuthongo, bekufanele ukuba asikwazi kuphela ukuqhubeka nemicimbi yethu ebomini, kodwa kufuneka siphulukane nezibonelelo ezihle esizifumana kuloo mmandla ungabonakaliyo siqhelene kangako.
Ukuba sifunde ukulala ngakumbi, endaweni yokuthoba ixesha elilahlekileyo, okanye silinyamezele njengebubi elifunekayo, kufanele singene kulwalamano olusondeleyo neli lizwe elingabonakaliyo kunelo simi kulo ngoku, kwaye into ekufuneka sifunde kuyo ingachaza Iimfihlakalo ezininzi zobomi bokwenyama.
Ixesha lokulala kunye nokuvuka ngumfuziselo wobomi kunye namazwe emva kokusweleka. Ubomi bokuvuka kosuku luphawu lobomi obunye emhlabeni. Ukuvuka kubuthongo bobusuku kwaye ulungiselele umsebenzi wosuku yinto enomdla ebuntwaneni bomntu kunye nokulungiselela umsebenzi wobomi. Emva koko kuza izilangazelelo, uxanduva kunye noxanduva lobomi basekhaya, ubomi beshishini, ubumi kunye nobumi, kwaye ke ukuguga. Emva koko kuza ubuthongo obude koko ngoku sikubiza ngokuba kukufa, kodwa okwenyani ukuphumla nokulungiselela omnye umsebenzi wobomi, kanye njengokuba ukulala kusilungiselela umhla olandelayo. Kubuthongo obunzulu asikhumbuli nto yobomi bosuku, amaxhala omzimba, kwaye de kube sibuyile ebomini bavuswa yilezi zikhathalelo ziphakanyisiweyo kwakhona. Sifile emhlabeni xa silele kakhulu ngokungathi umzimba usengcwabeni okanye uguqukele eluthuthwini.
Okusiqhakamshelayo imihla ngemihla luhlobo lomzimba, ekuchukumiseni iinkumbulo zosuku lwangaphambili. Ke ukuba emva kokulala sifumana le mifanekiso okanye iinkumbulo ezisilindeleyo kumda wobomi, kwaye sizamkele njengezethu siyaqhubeka nokwakha imifanekiso. Umahluko phakathi kokufa kunye nokulala ngokunxulumene neli lizwe kukuba sifumana umzimba usilindele xa sibuyela kwihlabathi emva kokulala, lo gama siswelekile sifumana umzimba omtsha ekufuneka siwuqeqeshe kwaye siwukhulise endaweni yokuba silungele kwangoko sebenzisa.
Iathom, iimolekyuli, iiseli, amalungu kunye nomzimba olungelelanisiweyo, ngalinye kufuneka libe nexesha lokuphumla nokulala ukuze umbutho uqhubeke unjalo. Umntu ngamnye kufuneka abe nexesha lokuphumla ngokusebenza.
Yonke into kwindalo yonke iyazi, kodwa into nganye eyaziyo kwindiza yayo, nangokobungakanani bemisebenzi yayo. Umzimba womntu uphela unemigaqo-nkqubo elungelelanisa, exhasa kunye nokungena kumalungu kunye namalungu omzimba. Lungu ngalinye lomzimba linomgaqo-nkqubo oqinisekileyo wokubamba nokubandakanya iiseli zawo. Iseli nganye inomgaqo oqinisekileyo wokubamba kwiimolekyuli ngaphakathi komgangatho wayo. Imolekyuli nganye inomgaqo okhuselayo otsala iiathom kwizinto zazo kwaye zizigcina zigxile. I-atom nganye inomgaqo-nkqubo owazi ukuba ngumoya wezinto zayo. Kodwa i-atom iyazi i-atom kuphela xa isebenza njenge-atom kwiplanethi yeatom kuhlobo lwe-atom ekuyo, kwaye ikwicandelo le-athom elilelayo. Umzekelo, iplanethi yomgaqo-siseko wokwazi kweatom yikhabhoni ngumgaqo wezinto, kodwa uhlobo oluthile lomgaqo okwazi ukwenzeka yikhabhoni, kwaye ubungakanani bayo njengomgaqo oyimfuneko ngokuhambelana nokusebenza kwawo. umsebenzi njengenxalenye yekharbhon. Ke unazo zonke izinto zento nganye eyayo umgaqo-siseko wayo Lo gama i-atom ihlala ihleli kwinto yayo ikhokelwa ngokupheleleyo ngumgaqo okwilizwi eliyinxalenye yawo, kodwa xa ingena ngokudityaniswa neeathom zezinye izinto, ilawulwa ngumgaqo wokudibanisa ulwazi owahlukileyo ngokwawo, okwangoku njengeatom yekhabhoni yenza umsebenzi wekhabhoni.
Iiatom ngamasuntswana angabonakaliyo omoya-ongena ngokudibeneyo ngokomgaqo wokuyilwa okanye wohlobo. Umgaqo wokuqonda wemolekyuli isebenza njengoyilo okanye ifom. Lo mgaqo wokuqonda woyilo okanye ifom utsala ii-atom eziyimfuneko kuyilo lwazo, kunye neeatom, nganye isebenza ngokwento yayo okanye umgaqo-siseko wayo, bathobela umthetho wokutsala kwaye ngamnye ungena ekudibaniseni nasekuyilweni, walathiswa wabanjwa egxila Umgaqo wokumazi we molekyuli. Le yimpembelelo elawulayo kubo bonke uBukumkani bamaminerali, elinyathelo lokugqibela ukusuka kwilizwe lomzimba elibonakalayo ukuya kwilizwe elibonakalayo kunye nenqanaba lokuqala ukuya phezulu kwimbonakalo ebonakalayo. Umgaqo wokuqonda woyilo okanye ifom uya kuhlala uhleli unjalo nje ukuba bekungekho mgaqo wobomi owaziyo, umsebenzi lowo ukwanda, ukukhula. Umgaqo obalulekileyo wobomi ugijimela kule molekyuli kwaye uyibangela ukuba ikhule kwaye ikhule, ngoko ke indlela kunye nokuyilwa kwale molekyuli ngokuthe ngcembe kukhula kuyilo nakwimo yeeseli. Umsebenzi womgaqo-siseko owaziyo weseli bubomi, ukwanda, ukukhula. Umgaqo wokuqonda weqonga ngumnqweno. Lo mnqweno udibanisa iiseli kunye, utsalele kuye zonke izinto ezingena phantsi kwempembelelo zazo kwaye uxhathise lonke utshintsho ngaphandle kwesenzo salo. Umsebenzi womgaqo-siseko owaziyo kuwo onke amalungu yiminqweno; ilungu ngalinye lisebenza ngokomgaqo-nkqubo walo wokusebenza kwaye lixhathisa isenzo samanye amalungu ukuze, njengakwimeko yeeathom zezinto ezahlukeneyo ezisebenzayo phantsi komgaqo wokuqonda wemolekyuli ebabambe ikwimo, ngoku kukho ukulungelelanisa umgaqo-siseko wento yomzimba, obamba onke amalungu kunye ngokunxulumana. Umgaqo wokunxibelelanisa wolwazi lwemo yomzimba uphela ulawula amalungu kwaye uwanyanzele ukuba asebenze kunye, nangona elowo esenza ngokomgaqo wakhe wokuazi. Lungu ngalinye lijongana neeseli zalo ezidityaniswe kunye, nganye kwiiseli zayo yenza umsebenzi wayo owahlukileyo kwilungu. Iseli nganye ijika iimolekyhule ngaphakathi kwayo; imolekyuli nganye ibamba ii-atom zayo eyilwe ngayo ekugxilwe kuyo, kwaye i-atom nganye isebenza ngokomgaqo wayo owalathisayo, oyinxalenye yawo.
Ke ngoko sinomzimba wesilwanyana somntu kubandakanya zonke izikumkani zendalo: elemental emelwe ziiathom, i-molekyuli emi njengamaminerali, iiseli zikhula njengemifuno, ilungu lisebenza njengesilwanyana, nganye ngokwesimo sayo. Umgaqo ngamnye wokwazi uyazi imisebenzi yawo kuphela. I-atom ayisiyazi into yokusebenza kwe molekyuli, le molekyuli ayazi ukuba yintoni umsebenzi weeseli, iseli ayazi ukuba isebenze ntoni na, kwaye into ayiyiqondi imisebenzi yombutho. Ukuze sibone yonke imigaqo-siseko isebenza ngokufanelekileyo kwiplanethi yayo.
Ixesha lokuphumla kweatom lixesha apho imigaqo-siseko yokuqonda yemolekyuli iyeka ukusebenza kwaye ikhulule i-atom. Ixesha lokuphumla kwe molekyuli liza xa umgaqo-siseko wobomi urhoxisiwe kwaye uyayeka ukusebenza kwaye xa ubomi bukhutshiwe i-molekyuli ihlala injalo njengoko injalo. Ixesha lokuphumla kweseli lifika xa umgaqo-siseko wolwazi uphela ukuchasana kwayo. Ixesha lokuphumla kwelungu lixesha apho umgaqo-nkqubo wokudibanisa umzimba uqaphela ukusebenza kwawo kwaye uvumele amalungu ngalinye ukuba enze ngendlela yawo, kwaye aphumle indlela yokulungelelanisa umzimba oza xa umgaqo-siseko womntu ukwazi irhoxisiwe kulawulo lomzimba kwaye iwuvumela ukuba uphumle kuwo onke amalungu alo.
Ukulala yinto ethile eqinisekileyo yomgaqo-siseko othile owaziyo ukuba ukhokelela umntu okanye into ebukumkanini bendalo. Ukulala sisimo okanye imeko yomgaqo-siseko owaziyo ukuba, ukuyeka ukusebenza kwindiza yayo ngokwayo, kuthintela ubuhlakani ekusebenzeni.
Ukulala bubumnyama. Emntwini, ukulala, okanye ubumnyama, kukusebenza kwengqondo okudlulisa impembelelo yayo kwezinye izinto kunye nobuchule kwaye kuthintela isenzo sabo sokwazi.
Xa ingqondo eyeyona nto ibalulekileyo yomzimba wesilwanyana esisebenza ngokwalo okanye ngalo mzimba, onke amalungu omzimba, nawo wonke, aphendule kwiingqondo zengqondo, ukuze ngelixa ingqondo ilawule, Amandla eengqondo kunye neemvakalelo zigcinwa zisetyenziswa kwaye yonke inkcitho yabasebenzi emzimbeni kufuneka iphendule. Kodwa umzimba unokuphendula kuphela okwexesha.
Ukulala kuza xa amasebe ahlukeneyo omzimba ediniwe kwaye ediniwe sisenzo sosuku kwaye engakwazi ukuphendula kumandla engqondo, kwaye ke ukusebenza kwengqondo okulala kukhuthazwe. Umgaqo wokuqiqa emva koko uphulukana nokubamba amandla alo. Amandla akakwazi ukulawula iimvakalelo ezibonakalayo, iimvakalelo ezibonakalayo ziyayeka ukubamba amalungu, kunye nomzimba ubengene esazweni. Xa umgaqo-siseko wengqondo uyekile ukusebenza ngamandla engqondo kwaye uziyekisile ngokwamanqanaba okusebenza, ukulala sele kwenzekile kwaye umgaqo-siseko awazi nelizwe elonwabisayo. Ebuthongweni umgaqo wokuqonda womntu unokuba ngumlinganiso kwaye ugutyungelwe kukungazi ubumnyama okanye kungenjalo unokusebenza kwindiza ephezulu kunobomi obuvuselelayo.
Unobangela wokurhoxiswa komgaqo wokuqonda uya kubonakala ngokufundwa kwengqondo yokulala. Imolekyuli nganye, iseli, ilungu lomzimba kunye nomzimba xa uwonke, yenza umsebenzi wayo; kodwa umntu ngamnye unokusebenza ixesha elithile, kwaye ixesha elimiselweyo luxanduva lwento nganye. Xa isiphelo sexesha lomsebenzi sisondela ekubeni ingakwazi ukuphendula kwimpembelelo elapha ngasentla, ukungakwazi ukusebenza kuyazisa ifuthe lokungakwazi kunye nefuthe lokuguqula umgaqo olawulayo ongaphezulu kwawo. Into nganye esebenza ngokobunjani bayo, i-athomu, iimolekyuli, iiseli kunye namalungu emzimbeni wesilwanyana, yazisa ngomgaqo wokumanyanisa wokumanyanisa uhlobo lomzimba wexesha lokuphumla njengoko kumiselwe luhlobo lwento nganye, emva koko imigaqo nganye elawula amandla iyasusa impembelelo yayo kwaye ivumele enye engezantsi ukuba iphumle. Le yinto eyenzeka koko kubizwa ngokuba kukulala kwendalo.
Umgaqo wokuqonda wendoda unendawo yayo entlokweni, nangona ugqithisa kuwo wonke umzimba. Ngelixa ihleli entlokweni indoda ayilali nangona isenokungazi izinto ezikujikelezileyo, kwaye nomzimba uphumle ngokupheleleyo. Umgaqo wokuqonda wendoda kufuneka ushiye intloko kwaye ungene emzimbeni ngaphambi kokuba ulale. Umntu ohlala engqongqo ngelixa ehleli okanye ehleli engalalanga. Umntu ophuphayo, nangona umzimba wakhe uphumle ngokupheleleyo, akalali. Ukulala kwendoda eqhelekileyo kukulibala ngokupheleleyo kwayo yonke into.
Isibonakaliso sokuqala sesidingo sokulala kukungakwazi ukunikela ingqalelo, emva koko kuye kufipike, kungabikho luhlu okanye ukudakumba komzimba. Izihlunu ziyakhululeka, iinkophe ziyavala, amachaphaza amenye enyuka. Oku kubonisa ukuba umgaqo-siseko unikezele ngokulawula ukulungelelanisa izihlunu zomzimba. Umgaqo wokuqonda komntu emva koko uqhawula esihlalweni saso somzimba emzimbeni we-pituitary, okwiziko elilawulayo lenkqubo yemithambozelo yomzimba, okanye kungenjalo eli ziko lityhafile kangangokuba lingakwazi ukuthobela. Ke ukuba akukho nanye into yokufunxa enomdla kwengqondo, ishiya isihlalo sayo esilawulayo emzimbeni we-pituitary, kwaye inkqubo ye-nerve iphumle ngokupheleleyo.
Ukuba ukulibala ngayo yonke into kuye kuthiwe omnye angathi ulele, kodwa ukuba imeko engazi nto ikhoyo, okanye iphupha lolo naluphi na uhlobo lubonakala, ke ubuthongo abufikanga, kuba imigaqo-nkqubo yengqondo isesentlokweni kwaye ithathwe ziimvakalelo ezi-subjective endaweni yenjongo, ekuphela kokuziswa kolala.
Ephupheni umgaqo-nkqubo wokuqonda unxibelelana nemijikelezo yemithambo echaphazela iliso, indlebe, impumlo kunye nomlomo, kunye namaphupha ezinto ezinxulumene nezi mvakalelo. Ukuba ilungu elithile lomzimba liyachaphazeleka, ligula, okanye lenzakele, okanye linyanzelwe, linokubamba ingqalelo yomgaqo wokuqonda kwaye libangele ukuphupha. Ukuba, umzekelo, kukho iintlungu ezinyaweni, kuya kuchaphazela amaziko ahambelana nawo kwingqondo, kwaye ezi zinokuphosa imifanekiso exekeneyo ngaphambi komgaqo wolwazi wengqondo ohambelana nenxalenye echaphazelekayo; okanye ukuba kutyiwa ukutya okungekenziwa sisisu, njengomzekelo ongaqhelekanga, ingqondo ichaphazelekile kwaye zonke iintlobo zemifanekiso engalunganga inokuchazwa engqondweni. Ingqondo nganye inesitho esichaziweyo entloko, kwaye umgaqo-siseko uqhagamshelene nala maziko ngokusebenzisa i-nerve ekhokelela kuwo, nangobudlelwane be-etheric. Ukuba elinye lala malungu lenziwe, babamba ingqalelo yomgaqo-siseko, kwaye ubuthongo abuyi kuza. Xa umntu ephupha, umgaqo-siseko usesentlokweni, okanye ubuyile kuloo ndawo yomqolo wesibeleko. Kangangokuba umntu uphupha iphupha eliqhelekileyo, umgaqo oqinisekileyo awukho mde kunentambo yomgogodla kwi-vertebrae yesibeleko ephezulu. Njengoko umgaqo-siseko wehla ukusuka kokuqala kwe-vertebrae yomlomo wesibeleko, iyayeka ukuphupha; Ekugqibeleni umhlaba kunye neemvakalelo ziyanyamalala kwaye ulale.
Nje ukuba umgaqo-siseko wolwazi womntu ususile kwindiza ebonakalayo, imijikelezo yomhlaba yomhlaba kunye nefuthe elijikelezileyo liqalisa umsebenzi wabo wokulungisa izicubu kunye namalungu omzimba. Xa izihlunu zihlaziyiwe, kwaye umzimba ukhululekile kwaye ukwisikhundla esifanelekileyo sokulala, iigesi zombane kunye nemijikelezo yemagnethi ziyalungisa ziphinde zibuyisele umzimba kunye namalungu alo kwimeko efanelekileyo.
Kukho inzululwazi yokulala, lulwazi lwemithetho elawula umzimba ngokunxulumene nengqondo. Abo bangavumiyo ukuthobela umthetho wokulala bahlawula isohlwayo ngokugula, izifo, ubuhlanya, okanye nokufa. Indalo ichaza ixesha lokulala, kwaye eli xesha libonwa zizo zonke izidalwa zakhe ngaphandle komntu. Kodwa umntu uhlala etyeshela lo mthetho ngendlela enza ngayo abanye, ngelixa yena ezama ukulandela uyolo lwakhe. Ubudlelwane obuhambelana phakathi komzimba nengqondo ziziswa kukulala okuqhelekileyo. Ukulala okuqhelekileyo kuvela kukhathalelo lwendalo lomzimba kwaye kuziswa sisikhundla esichanekileyo sokulala kunye nemeko yengqondo yangaphambili yokulala. Iseli nganye kunye nomzimba wayo, kunye nomzimba ngokwawo, uyahlulahlulwa. Eminye imizimba intle kakhulu kwimeko yayo, eminye imbi. Ngokwemibutho yomzimba ukuba yeyiphi indawo efanelekileyo yokulala.
Umntu ngamnye, ke, kufuneka, endaweni yokulandela nayiphi na imithetho ebekiweyo, afumane indawo elungele ukuba intloko yakhe ilele kuyo neliphi icala lomzimba. Umntu ngamnye kufuneka azazi ezi zinto ngamava akhe ngokubonisana nangokubuza kumzimba ngokwawo. Le micimbi akufuneki ithathwe njengento yokuzonwabisa, kwaye yenziwe ukuthanda, kodwa kujongwa ngendlela efanelekileyo kwaye isingathwe ngayo nayiphi na ingxaki kufuneka: yamkelwe xa amava egunyazisa, kwaye enqatshiwe ukuba akukho ngqiqweni, okanye ukuba ubungqina bukhona buchasene. .
Ngokwesiqhelo, imizimba ehlengahlengiswe kakuhle yenziwa polar ukwenzela ukuba intloko ibhekise emantla, kwaye iinyawo ziye emazantsi, kodwa amava abonakalisile ukuba abantu, ngokulinganayo ngokwasemzimbeni, balala bhetele ngentloko ekhomba kulo naluphi na olunye ulwalathiso abathathu
Ngexesha lokulala umzimba ngokungaguqukiyo utshintsha indawo ekuhlala kuyo nendawo ezijikeleze kuyo kunye nemijikelezo yemagnethi ebakhoyo. Ngokwesiqhelo, akulunganga ukuba umntu alale elele ngomqolo, njengoko imeko enjalo ishiya umzimba uvuleleke kwiimpembelelo ezininzi ezenzakalisayo, ukanti kukho abantu abalala kakuhle kuphela xa belele emqolo. Iphinde yatsho ukuba akulunganga ukuba ulale kwicala lasekhohlo kuba kukho uxinzelelo entliziyweni luphazamisana nokujikeleza kwegazi, uninzi luye lukhethe ukulala ngakwicala lasekhohlo kwaye alufumani bungozi ekufumaneni oko. Abantu abaphethwe ziindonga zabo zilahlekileyo ithoni yabo eqhelekileyo, bahlala benentlungu ngasemva xa bevuka ekuseni. Oku kuhlala kubangelwa kukulala ngomqolo. Umzimba, ke ngoko, kufuneka uchukunyiswe ngombono wokushenxisa okanye uhlengahlengiso phakathi kobusuku buye kwindawo eya kuthi ikwazi ukukhululeka ngakumbi kunye nentuthuzelo.
Imijikelo emibini yobomi ihambelana ikakhulu nokuvuka kunye nokulala. Le yimijikelezo yelanga nelanga. Indoda iphefumla ngaphakathi kwempumlo enye ngexesha. Malunga neeyure ezimbini amandla elanga eza kunye nomoya ophuma ngaphakathi kwimpumlo eyiyo malunga neeyure ezimbini; kukho ixesha lokulinganisa kwimizuzu embalwa kunye nokutshintsha komphefumlo, emva koko iinyanga zangoku zikhokelela ekuphefumleni okudlula kwimpumlo yasekhohlo. Ezi zinto zihamba ngokuphefumla ziyaqhubeka ukutshintsha ubomi babo bonke. Banempembelelo yokulala. Ukuba ukuyeka komphefumlo kufika kwaye kudlule kwimpumlo yasekhohlo, kuya kufumaniseka ukuba indawo ekufanele ukuba ilale kukulala kwicala lasekunene, kuba iyakuvumela umoya wenyanga ukuba uhambe ngokungagungqiyo kwimpumlo yasekhohlo. Kodwa ukuba, endaweni yoko, omnye uya kulala kwicala lasekhohlo, kuya kufumaniseka ukuba oku kutshintsha okwangoku; Ukuphefumla kuyayeka ukuhamba ngaphakathi kwempumlo yasekhohlo kwaye endaweni yoko kuhamba ngaphakathi kwempumlo yasekunene. Ukudluliselwa kwemijelo iya kufunyanwa ukuba yenzeke ngokukhawuleza isikhundla sitshintshiwe. Ukuba umntu akanakwazi ukulala, makayitshintshe indawo yakhe yokulala, kodwa ke makabe nomzimba wakhe ukuba ufuna ukuxoka.
Emva kokulala okuhlaziyayo, izibonda zazo zonke iiseli zomzimba zikhomba kwicala elinye. Oku kuvumela ukuba imibane yombane kunye nemagnethi ukuba ihambe phakathi kweeseli ngokufanayo. Kodwa njengokuba imini ihamba igqibe iingcinga zitshintsha indlela eya kwizibonda zeeseli, kwaye ebusuku akukho kuqubeka kweseli, kuba zikhomba kwicala ngalinye. Olu tshintsho lwepolarth luthintela ukuhambahamba kobomi, kwaye ngelixa ingqondo igcina isihlalo sayo esilawulayo embindini wenkqubo yeesistim, umzimba we-pituitary, le nkqubo yemithambo-luvo ithintela umzimba ekuphumleni nasekuvumeleni imijikelezo yemagnethi ukuba incekelele iiseli . Ukulala ke kubalulekile ukubuyisela iiseli kwindawo yazo echanekileyo. Kwisifo iiseli, ngokuyinxalenye okanye emzimbeni wonke, ngokuchaseneyo.
Lowo unqwenela ukulala kakuhle akufuneki athathe umhlala-phantsi kwangoko emva kokuba exabene nombuzo, okanye ebandakanyeka kwincoko emnandi, okanye engenelele kwimpikiswano, okanye xa ingqondo iphazamisekile, iphazamiseka, okanye ihleli nento yokwenza into enomdla, kuba ke ingqondo Kuyakubandakanyeka kakhulu kangangokuba kuya kuthi kuqala kuvume ukuwuyeka umxholo kwaye kuya kuthintela amalungu kunye namalungu omzimba ekuphumleni nasekufumaneni ukuphumla. Esinye isizathu sikukuba emva kwengqondo iwuqhubile umxholo kangangexesha elinzima, kunzima kakhulu ukuba kude nayo, kwaye iiyure ezininzi zobusuku zinokuchithelwa ukuzama kodwa ukusilela "ukulala." Ukuba ingqondo kakhulu ngokuthathwa sisifundo, omnye umxholo wokucinga wohlobo oluchaseneyo kufuneka waziswe, okanye incwadi ifundwe de kuthathelwe ingqalelo kwesihloko esifundayo.
Emva kokuthatha umhlala-phantsi, ukuba umntu akakhange azimisele kwesona sikhundla silungileyo ebhedini, uya kulala kwicala lasekunene kweyona ndawo ilula kwaye intofontofo, ephumla yonke imisipha aze avumele ilungu ngalinye lomzimba liwele kwimo yendalo. Umzimba awufanelanga ubonakale kubanda, okanye ubushushu kakhulu, kodwa kufuneka ugcinwe kubushushu obumnandi. Ke umntu kufuneka azive enobubele entliziyweni yakhe kwaye andise imvakalelo emzimbeni wonke. Onke amalungu omzimba aya kuphendula kwaye axhase ngokufudumala ngesisa kunye neemvakalelo. Ukuba umgaqo-siseko awazi kuthi emva koko ubuye ulale, uvavanyo oluninzi unokuzama ukulala.
Enye yeendlela eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukwenza ukulala kukubale. Ukuba kuzanywe oku kufuneka ubale kancinci kwaye ubize inani ngalinye ngengqondo ukuze uqonde ixabiso elilandelanayo. Oku kunefuthe lokudinwa kwengqondo yi-monotony yayo. Ngexesha ikhulu elinamashumi amabini anesihlanu lifikelele ekulala kuya kuba sele kugqityiwe. Enye indlela kwaye enye enokuthi isebenze ngakumbi kubantu abathanda ngokuqinileyo kunye nabantu abangenabuntu kakhulu, kukuzama ukujonga ngaphezulu. Iinkophe kufuneka zivaliwe kwaye amehlo ajonge phezulu ukuze akwazi ukujonga malunga ne-intshi enye ngentla nangasemva kwengcambu yempumlo. Ukuba umntu uyakwazi ukwenza oku ngokufanelekileyo, ubuthongo buhlala buza ngaphakathi kwemizuzwana embalwa, kwaye rhoqo ngaphakathi kwemizuzwana engamashumi amathathu. Isiphumo esiveliswa ngokuguqula amehlo ajonge phezulu kukucima ilungu lomzimba emzimbeni wentambo. Ngokukhawuleza xa ingqalelo iphendukele kwimo yendalo yengqondo ilahlekile. Emva koko uphuphe okanye ulala ngeesile. Kodwa eyona ndlela kwaye kulula kakhulu kukuba nentembelo kumandla akho okulala kunye nokulahla iimpembelelo eziphazamisayo; Ngale ntembelo nangayo imvakalelo yobubele entliziyweni ilala ngokufutshane.
Kukho izinto ezithile ezenzeka emzimbeni ezihlala zihamba nokulala. Ukuphendula kuyancitshiswa, kwaye endaweni yokuphefumla okuvela kwisisu sesisu, umntu uphefumla ukusuka kwindawo yecacac. Iparse iyatyibilika kwaye isenzo sentliziyo siba kancinci. Kwiimeko ezininzi kufunyenwe ukuba kukho umahluko kubukhulu bomzimba xa ulele. Amanye amalungu omzimba enyuka ngobukhulu, ngelixa amanye amalungu encipha. Izixhobo zomphezulu womzimba ziyanda, ngelixa iingqondo zobuchopho ziba zincinci. Ingqondo iyaqaqamba kwaye ikhontrakthi xa ulele, kodwa xa ubuya umgaqo-siseko, ithatha umbala oqaqambileyo ngakumbi okanye umbala obomvu. Ulusu lusebenza ngakumbi ekulaleni kunakwimo yokuvuka, sesona sizathu siphambili sokuba umoya kumagumbi okulala ube ungacocekanga ngokukhawuleza kunangexesha lokuvuka; kodwa lo gama ulusu luhanjisiwe ligazi, amalungu angaphakathi akwimeko yeemia.
Isizathu sokwahluka kobungakanani kumalungu omzimba kukuba, xa umgaqo-siseko uthatha indawo evela kwingqondo, isenzo sengqondo siyathamba, ukujikeleza kwegazi kuyehla, kwaye, njengelungu elisebenzayo lomgaqo wokuqonda, Ingqondo ke iphumle. Akunjalo ngenxalenye yomzimba. Unobangela woku kukuba lo gada womlondolozi womzimba, umgaqo-nkqubo wokuqonda, uthathe umhlala-phantsi kwaye amalungu ayo asebenzayo ahlala ekuphumleni, umgaqo wokunxibelelanisa wolwazi lwendlela umzimba uthatha umthwalo kwaye ukhusela umzimba kuyo yonke iingozi ityhilwe xa ulele.
Ngenxa yezi ngozi zininzi ulusu lunegazi elijikelezayo elenza ukuba luziveleleke kwiimpembelelo kunakweli xesha lokuvuka. Kwimeko yokuvuka kwemithambo-luvo yemoto kunye nezihlunu zokuzithandela ziye zawuthwala umzimba, kodwa xa umthetho-siseko womntu uthatha umhlala-phantsi, kunye nenkqubo yemithambo-luvo elawula izihlunu ngokuzithandela kunye nokuhamba komzimba sele ipholile. kwaye izihlunu zomzimba ziyaqala ukudlala. Kungenxa yoko le nto umzimba ebhedini ushenxiswa kwenye indawo uye kwenye, ngaphandle koncedo lomgaqo wokuqonda komntu. Izihlunu ezinganyanzelekanga zihambisa umzimba kuphela njengoko zenziwe yimithetho yendalo kunye nokugcina umzimba wale mithetho.
Ubumnyama buba ngcono ngakumbi xa umntu elele kuba imithambo-luvo yomzimba awuchaphazelekanga ebumnyameni. Ukukhanya okusebenzayo kwi-nerve kudlulisela umbono kwingqondo enokucebisa ngeendlela ezininzi zamaphupha, kunye namaphupha ahlala esiphumo sesandi esithile, okanye ukukhanya okusebenzayo emzimbeni. Nawuphi na umsindo, ukuchukumisa okanye ukubonakala kwangaphandle, kwaoko kuzisa utshintsho kubungakanani kunye nobushushu bengqondo.
Ukulala kukwaveliswa zii-narcotic. Abazisi ubuthongo obunempilo, njengoko i-narcotic okanye iziyobisi iphazamisa i-nerves kwaye ibakhuphe kumgaqo wokuqonda. Iziyobisi akufuneki zisetyenziswe ngaphandle kokuba kwiimeko ezigqithisileyo.
Ukulala ngokwaneleyo kufuneka kunikezwe umzimba. Inani leeyure alinakubekwa ngokuthe ngqo. Ngamanye amaxesha siziva sihlaziyekile ngakumbi emva kokulala iiyure ezine okanye ezintlanu kunokuba kunjalo ngamanye amaxesha ukusuka kubini inani. Umgaqo kuphela onokuthi ulandelwe malunga nobude bokulala kukuba uthathe umhlala phantsi ngaphambi kwexesha kwaye ulale de umzimba uvuke. Ukulala phantsi ebhedini kunqabile kuyingenelo kwaye kuhlala kuyingozi. Elona xesha lilungileyo lokulala, nangona kunjalo, ziiyure ezisibhozo ukusuka kweyeshumi ngokuhlwa ukuya kweyesithandathu kusasa. Malunga nentsimbi yeshumi, amandla kazibuthe omhlaba aqala ukudlala kwaye ahlala iiyure ezine. Ngeli xesha, kwaye ngakumbi kwiiyure ezimbini zokuqala, umzimba ungoyena mntu ungowangoku kwaye ufumana esona sibonelelo siphezulu. Kwi-AM ezimbini enye ngoku iqala ukudlala ebiza umzimba ngobomi. Oku kuqhubeka okwangoku malunga neeyure ezine, ukuze ukuba ukulala kuqalwe ngentsimbi yeshumi, ngazo zombini iiseli kunye namalungu omzimba bekuya kuba kuphumle kwaye kuhlanjwe yimagnethi yangoku engendawo; Ngezimbini umbane wombane uza kuqala ukukhuthaza umzimba, kwaye ngentsimbi yesithandathu iiseli zomzimba ziya kube zibekwe ityala kwaye zixhaswe ngokukhawuleza ukuba zithathe amanyathelo kwaye zibize ukuba ziqwalaselwe ngumgaqo wolwazi wengqondo. .
Ukungalali kunye nokulala kukungalungelelani, kuba ngelixa umzimba uhlala usebenza kwaye ulawulwa kwaye ulawulwa yimisipha kunye nezihlunu ngokuzithandela, indalo ayinakukhupha kwaye isuse iimveliso zenkunkuma, okanye ulungise umonakalo owenziwe emzimbeni ngokutya okusebenzayo. Oku kungenziwa kuphela ngelixa i-nerve kunye nemisipha yokungasebenzi ngokungathandabuzekiyo inolawulo lomzimba kwaye ilawulwa yimpembelelo yendalo.
Ukulala kakhulu kubi njengokungalali ngokwaneleyo. Abo bazilazila ngokutyeba kakhulu bahlala benengqondo etyibilikayo nevilaphayo nabantu abanobuvila, abanobukrelekrele obuncinci, okanye oonomatse abakuthandayo ukulala nokutya. Abantliziyo zityhafileyo badiniwe ngokulula kwaye nayiphi na imonotony iya kubangela ukulala. Abo bazilalisa kakhulu bayazenzakalisa, njengoko ukulala kakhulu kuhamba nomsebenzi wokungasebenzi kwamalungu kunye nezihlunu zomzimba. Oku kukhokelela ekuqiniseni, kwaye kunokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu. Ibangela iyeke isenzo se-gall bladder, kwaye ngexesha lokuhamba kwe-bile iinxalenye zayo ze-liquid zifakwe. Ukulala kakhulu, ngokwenza umthamo wethoni yomgaqo wamazinyo, uthande ukukhula.
Nangona abaninzi becinga ukuba baphupha ngexesha labo lonke lokulala, akufane kwenzeke njalo, kwaye ukuba kunjalo, bavukile batyhafile kwaye abonelisekanga. Kwabo balele kakuhle kukho amaxesha amabini ophuphayo. Eyokuqala kuxa amandla engqondo neemvakalelo sele zitshona kwi-abeyance; oku kuhlala kuthatha imizuzwana embalwa kuye kwiyure enye. Ixesha lesibini lelo lokuvuka, oko kukuthi, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ukusuka kwimizuzwana embalwa ukuya kwisiqingatha seyure. Ubude obucacileyo belo phupha alikho elibonisa elona xesha lichithwe, njengoko ixesha ephupheni lihluke ngokubanzi kwixesha njengoko sisazi kwimeko yokuvuka. Uninzi luye lwafumana amaphupha apho ephupheni kwathatha iminyaka okanye ixesha lobomi okanye ubudala ukugqitha, apho impucuko ibonwa ikhuphuka kwaye isiwa, kwaye lowo uphuphayo ebekhona kakhulu ngokungathandabuzekiyo, kodwa ekuvukeni kwakhe wafumanisa ukuba iminyaka okanye iminyaka yayiba yimizuzwana embalwa okanye imizuzu emva kwayo yonke.
Isizathu sokungafani kobude bamaphupha kunye nexesha njengoko sisazi, kungenxa yokuba sifundise amalungu ethu okuqonda ukuba abe nomkhwa wokuqikelela umgama kunye nexesha. Umgaqo wokuqonda osebenza kwilizwe elikwi-supersensuous ubona ubukho ngaphandle komda, ngelixa amalungu ethu eqikelela ixesha kunye nomgama ngokujikeleza kwegazi, kunye nokujikeleza kwe-nerve fluid, njengoko isetyenzisiwe ngokunxulumene nelizwe langaphandle. Iphupha kuphela kokususwa komgaqo okwazi ukusebenza ekusebenzeni ngamalungu omzimba wangaphandle kwindiza ebonakalayo ukuya ekusebenzeni kwayo ngamalungu angaphakathi kwindiza yengqondo. Inkqubo kunye nendinyana inokubonwa ngumgaqo owaziyo xa ingqondo ifunde ukuzikhupha kwizitho kunye nemvakalelo yomzimba.
Umzimba wonke uphela, kodwa wenziwe yimizimba emininzi, nganye nganye ikwimo yento eyahlukileyo kwelinye. Kukho umba we-atomic apho umzimba wonke wakhiwe khona, kodwa wahlulahlulwe ngokwemigaqo yoyilo. Lo ngumzimba ongabonakaliyo. Ke kukho umzimba wemolekyuli, ongumgaqo woyilo we-astral ngokokulandelelana athi ama-athomu ahlelwe kwaye anike ifom kuwo wonke umzimba. Kukho umzimba wobomi, ongumzimba wengqondo ohambisa emzimbeni weemolekyuli. Ukanti enye yinto yomzimba onqwenela ukuba ngumzimba obonakalayo ongabonakaliyo kuwo wonke umzimba wangaphambili. Ukongeza kwezi kukho umzimba wengqondo, okhanyayo njengokukhanya okukhanyayo ngaphakathi nangazo zonke ezo sele zikhankanyiwe.
Ngoku xa umgaqo-siseko owaziyo okanye umzimba wengqondo usebenza ngokusebenza kwimo yesiqhelo kwimo yomzimba, njengomzimba wokukhanya ujika ukukhanya kwawo kuyo yonke eminye imizimba kwaye ukhanye kwaye ubakhuthaze kunye nemvakalelo kunye namalungu ukuba enze into. Kwakwelo lizwe kuthiwa umntu uvukile. Xa umzimba okhanyayo wengqondo uvulelwe ixesha elide, yonke imizimba esezantsi yoyiswa kukukhanya kwaye abakwazi kuphendula. Ukuza kuthi ga ngoku babefakwe kumhlaba wokukhanya kwengqondo kwaye ngoku bayadodobala kwaye umzimba wokukhanya uvulekele kumzimba we-moleic psychic osisihlalo esingaphakathi seemvakalelo zangaphandle kwaye uqulethe imizwa yomoya. Kulapho ke siphupha kwaye amaphupha eentlobo ezininzi ngokokubakho kokuchasana; kwaye amaphupha avelayo evela kwizinto ezininzi.
Unobangela wobusuku bobunye ngamanye amaxesha bubangelwa kukungakwazi ukusebenza kwezixhobo zokwenza umthambo ukuze usebenze, kunye nomkhwa wokuphosa imifanekiso egqithisileyo kwingqondo, obonwa ngumgaqo owazi ngengqondo; amaphupha obusuku asenokubangelwa kukupheliswa kwegazi okanye inkqubo yovalo okanye ukunqunyulwa kwemithambo yeemoto kwimithambo yeemvakalelo. Olu nqamlezo lunokubangelwa kukolulwa kweerveb okanye ngokuzisusa. Omnye unobangela kukungasebenzi komzimba. Eli alilophupha liveliswa kukungunda okanye ifashoni elahliweyo, kodwa yinto yemeko enzulu, kwaye kufuneka kuthathwe amanyathelo ngokuchasene nayo, kungenjalo isiphelo singaba sisiphumo, ukuba ayibikho ngqondo, kwaye iyaziwa into yokuba nobusuku obunjalo ngamanye amaxesha bube nesiphumo. ukufa.
Ii-Somnambulists zihlala zisebenzisa zonke iimvakalelo kunye nobuthakathaka besiqhelo bokuvuka, kwaye ngamanye amaxesha zibonise ukubangathi akubonakali kubomi bokuvuka kwesomnambulist. Umntu onqamlezayo unokuvuka ebhedini yakhe, ambathise, abophe ihashe lakhe aze akhwele kuloo ndawo akuyo azimisele ukuya; okanye unokunyuka ngokukhuselekileyo ngaphezu kwemithi okanye kwindawo enqabileyo apho kuya kuba bubudenge kuye ukuba avele; okanye unokubhala iileta kwaye azibandakanye, kwaye emva kokuba evuke engazi ngokupheleleyo ukuba kwenzeke ntoni. Unobangela we-somnambulism udla ngokubangelwa kukulawulwa ngumgaqo wolungelelwaniso wolwazi lwendlela umzimba oshukumisa ngayo iintlungu nemisipha yokungasebenzi, ngaphandle kokuphazanyiswa ngumgaqo wolwazi. Isenzo se-somnambulistic sisiphumo kuphela. Unobangela wayo kungenxa yeenkqubo ezithile zokucinga esele zenzekile ngaphambili, nokuba kukwimo yomdlali weqonga okanye ukuphakanyiswa yingqondo yomnye.
I-Somnambulism luhlobo lohanahaniso, ngokufuthi ukuqhutywa kweengcinga ezithile eziye zachukunyiswa kumgaqo-siseko womzimba, njengaxa umntu ecinga ngokunzulu ngesenzo okanye into ebeka ezi ngcinga kuyilo okanye kumgaqo wendlela yomzimba wakhe wenyama . Ngoku xa umntu eye wachukumisa umgaqonkqubo wakhe wefom kwaye uthathe umhlala phantsi ebusuku, umgaqo wakhe oqinisekileyo uyarhoxa kwisihlalo sayo esilawulayo kunye neziko lengqondo kunye ne-nerve nerves kunye nemisipha yokuvuselela ihlaziyekile. Ke kuxa ukuba izinzwa kunye nezihlunu ezizenzekelayo zithathwa. Ukuba oku kunyanzeliswe ngokwaneleyo ziimvo ezifunyenwe kumgaqo wokucinga ngelixa bekuphaphama, bathobela ngokuzenzekelayo ezi ngcinga okanye imbonakalo ngokuqinisekileyo njengoko umxholo othunyelisiweyo uthobela umqhubi wakhe. Ukuze iimpazamo zasendle ezenziwa ngumntu obonakalayo ngamanye amaxesha ziba kukufezekiswa kwephupha elithile elibekwe kumzimba wefom ngexesha lokuvuka, kubonakalisa ukuba i-somnambulist sisifundo se-hypnosis.
Kodwa le ye-hypnosis ye-self ayisoloko isisiphumo sephupha lomhla, okanye ifashoni yasendle, okanye ukucinga kokuvuka kobomi kuphela. Ngamanye amaxesha umgaqo-siseko okwilizwi elinye elinzulu kwaye udlulisela imbonakalo yeli phupha elinzulu kwimeko yokulungelelanisa umgaqo-siseko womzimba wefom. Ke, ukuba umzimba lo usebenza kwizinto ezifunyenweyo ezifunyenweyo, izinto ezenzeka ngomnye umntu ziboniswa kwezinye izinto ezinzima nezinzima, ezifana nezo zifuna ukusebenza kwengqondo ekubaleni mathematics. Ezi zizizathu ezibini zesomnambulism, kodwa zininzi ezinye izizathu, ezinjengobuntu obumbaxa, ukunxunguphala, okanye ukuthobela imiyalelo yomnye umntu onokuthi ngokuhanahanisa angayalela umzimba womnye umntu kwinto yakhe ezenzekelayo.
Ugqirha luhlobo lokulala oluziswa kukuthanda komntu owenza into engqondweni yomnye. Kwizinto ezifanayo ezithi zenzeke xa zilala kwendalo ziveliswa ngobuchule ngumbonisi. Zininzi iindlela ezilandelwa ngabavavanyi, kodwa iziphumo ziyafana. Kwi-hypnosis opharetha ubangela ukudinwa kweenkophe, ukuphakama ngokubanzi, kunye nengcebiso, okanye ngokulawula uya kunyanzela umgaqo-siseko wokuqonda kwesihloko ukurhoxa esihlalweni nakwiziko ebuchotsheni, kwaye ke lulawulo lweemvakalelo ezingasebenziyo kwaye izihlunu zomzimba zinikezelwe, kwaye umgaqo-siseko uyazi ukuba awuyeki kumaziko abo e-psychic kunye namaziko okuziva, kwaye ulale ubuthongo obunzulu. Umqhubi uthatha indawo yengqondo yomnye aze ayalele iintshukumo zomgaqo womzimba olawula intshukumo yokungasebenzi. Lo mgaqo-nkqubo uphendula ngokukhawuleza kwingcamango yomqhubi ukuba isifundo sihle, nengqondo yomqhubi ikwelo automaton yomzimba eyakhe umgaqo-nkqubo wezengqondo.
Isifundo esithunyelweyo sinokubonisa zonke iimeko zesomnambulism kwaye sinokuthi senziwe ukuba senze amandla amangalisayo okonyamezelo kuba istolikhi sinokuthi sisungule ezo zinto njengoko yena esithanda isifundo, ngelixa, intshukumo yomntu othile ixhomekeke kwingcamango yangaphambili, nokuba yintoni na. Umntu makangaze naphantsi kwazo naziphi na iimeko okanye imeko angenise ukuba athunyelwe hypnot, njengoko kuphelela ukumnikeza kunye nomzimba wakhe into yokudlala kuyo nayiphi na impembelelo.
Kuyenzeka ukuba umntu axhamle kwi-hypnosis yakho ukuba yenziwe ngobulumko. Ngokuyalela umzimba ukuba wenze imisebenzi ethile uyakuziswa ngokucokisekileyo phantsi kwempembelelo yesizathu sakho, kwaye kuya kuba lula kumgaqo wokuqiqa ukuqondisa iintshukumo zobomi kunye nezomzimba ukuba umzimba uqeqeshekile ukuba uphendule. umgaqo wokuqiqa ngawo onke amaxesha. Enye yezo zinto kukuvuka ekuseni ngela xesha ingqondo yayalela ukuba umzimba uvuke ngaphambi kokuba uthathe umhlala-phantsi, nokuba uthi uvuke ngokukhawuleza kwaye uhlambe unxibe kwangoko. Oku kunokuthwalwa kukude ngokuqondisa umzimba ukuba wenze imisebenzi ethile ngamaxesha athile osuku. Ibala lovavanyo olunje lukhulu kwaye umzimba wenziwa ukonakala ngakumbi ukuba le miyalelo inikwa kuqala ebusuku ngaphambi kokulala.
Sifumana izibonelelo ezininzi ekulaleni, kodwa kukwakhona neengozi.
Kukho umngcipheko wokuphulukana namandla xa ulele. Oku kunokuba ngumqobo omkhulu kwabo bazama ukuphila ubomi bokomoya, kodwa kufuneka kuhlangatyezwe kwaye koyiswe. Xa ubumsulwa bomzimba buye bagcinwa ixesha elinikiweyo, loo mzimba uba yinto ekhangayo kwiindidi ezininzi zamaqobelo kunye neempembelelo zehlabathi ezingabonakaliyo zeemvakalelo. Oku kusondela emzimbeni ebusuku nakwizinto zokulala kwimigaqo-siseko ehambisanayo yomzimba, elawula izinzwa kunye nemisipha engasebenziyo. Ngokwenza lo mgaqo-siseko wale fomu yomzimba, amaziko e-organic ayavuselelwa kwaye ayakhuthazeka, kwaye alandelwe ziziphumo ezingathandekiyo. Ukuphulukana nobundilele obunamandla kungamiswa ngokuqinisekileyo kunye neempembelelo ezibangela ukuba zithintelwe ekubeni zisondele. Lowo uyazi ngexesha lokulala komzimba, ngokuqinisekileyo, uya kuzigcina zonke iimpembelelo ezinjalo kunye nemibutho, kodwa lowo ungazi kanjalo unokuzikhusela.
Ukulahleka okubalulekileyo kuhlala kungumphumo weengcinga zomntu ngexesha lokuvuka kobomi, okanye iingcinga ezingena kwingqondo yakhe nakulowo uphulaphuleyo. Oku kuchukumisa umgaqo wokunxibelelanisa kwaye, njengomzimba obonakalayo, ngokuzenzekelayo kulandele ukugoba kwengcinga egxininiswe kuyo. Makhe ke umntu ozikhusele ebuthongweni makalondoloze ingqondo emsulwa ekuvukeni. Endaweni yokonwabisa iingcinga ezivuka engqondweni yakhe, okanye ezinokuphakanyiswa nguye, makabayalele, bathathe abaphulaphuli kwaye bangavumi ukubabona. Le iya kuba lolunye lwezona zinto ziluncedo kwaye ikhuthaze ukulala ngokusempilweni nokuba luncedo. Ukuphulukana nobundilele ngamanye amaxesha kubangelwa zezinye izizathu kunokonwaba okanye iingcinga zabanye. Oku kungathintelwa, nangona kuthatha ixesha. Umntu oxhwaleke kangaka makawubize umzimba wakhe ukuba abize kuye xa kukho ingozi, kwaye ke makahlawule umthetho wokuba avumele naluphi na undwendwe ukuba aluhambi; kwaye imele ihambe ukuba unikwe umyalelo olungileyo. Ukuba kuvela umntu ophupha ephupheni kufuneka abuze ukuba: "Ungubani?" Kwaye "Ufuna ntoni?" Ukuba le mibuzo ibuzwa ngokunyanzelekileyo, akukho qumrhu linokwala ukuphendula, nokuzenza bona kunye neenjongo zabo. Xa le mibuzo ibuzwa undwendwe, indlela yayo entle idla ngokubeka indawo eyifihlayo kakhulu, ethi, xa sele inyanzelisiwe ukuba ibonise ubunyani bayo, iicarls okanye i-shrieks kwaye inyamalale ngokungathandabuzekiyo.
Ukuhlawulisa ingqondo ngezi zibakala zingasentla, kunye nokuthintela ngakumbi ingozi efanayo yokulala, umntu kufuneka ekuthathe umhlala phantsi abe nemvakalelo enobubele entliziyweni kwaye ayandise ngomzimba wonke de iiseli zivuye kamnandi. Ngokwenza oko emzimbeni, kunye nomzimba njengeziko, makabe nomfanekiso-ngqondweni womhlaba ojikeleze ukuba ubekwe ityala ngononophelo oluhle, oluthi luvele kuye luze luzalise yonke indawo yegumbi, njengoko kunjalo ukukhanya iglozi yombane. Le iya kuba yeyakhe imeko, apho ajikelezwe kwaye alale ngaphandle kwengozi engaphezulu. Umngcipheko kuphela wokuya kuye iya kuba ziingcamango zabantwana bengqondo yakhe. Ewe kunjalo, le meko ayifumaneki ngaxeshanye. Sisiphumo somzamo oqhubekayo: woqeqesho lomzimba, nengqeqesho yengqondo.
Kukho i-zodiac yokulala kwaye kukho i-zodiac yokuvuka. I-zodiac yobomi bokuvuka buvela kumhlaza (♋︎) ukuya kwi-capricorn (♑︎) ngendlela ye-libra (♎︎). I-zodiac yokulala isuka kwi-capricorn (♑︎) ukuya kumhlaza (♋︎) ngendlela ye-aries (a). I-zodiac yethu yobomi bokuvuka buqala kumhlaza (♋︎), ukuphefumla, kunye nophawu lokuqala lokuba sazi. Luhambo lokuqala ukusuka kwimeko enzulu yokulala ekuseni okanye emva kokuphumla kwethu kwemihla ngemihla. Kule meko umntu akahlali eyazi iifom okanye nayiphi na inkcukacha zobomi bokuvuka. Into kuphela umntu ayaziyo yimeko yokuphinda aphile. Ngomntu oqhelekileyo yimo ephucukileyo. Ukusuka apho, umgaqo-siseko wokucinga udlulela kwimeko eqonda ngakumbi, emelwe luphawu lwe-leo (♌︎), ubomi. Kule mibala yombuso okanye izinto eziqaqambileyo zibonwa kwaye ukuhamba kunye nokuphuma kobomi kuyavakala, kodwa ngokuqhelekileyo ngaphandle kokucaciswa kwefom. Njengoko ingqondo iqala kwakhona malunga nokunxibelelana nemeko yomzimba edlulisela kwimpawu virgo (♍︎), ifom. Kukule meko ukuba abantu abaninzi baphupha ngokubuyela ebomini. Iifom zibonwa apha ngokucacileyo, iinkumbulo zakudala ziyaqwalaselwa, kunye neempembelelo ezibangelwa yimvakalelo yomzimba zenza ukuba imifanekiso iphoswe kwi-ether yengqondo; Kwisihlalo sayo ingqondo ijongisisa ezi ntsingiselo kunye neengcebiso zeemvakalelo kwaye zizitolikele kulo lonke uhlobo lwamaphupha. Ukusuka kweli phupha likho kodwa inyathelo lokuvuka kobomi, emva koko ingqondo iphakamise ukuya kumzimba wayo kwimpawu ye-libra (♎︎), isondo. Olu phawu luhamba kuyo yonke imisebenzi yobomi bemihla ngemihla. Emva kokuvuswa komzimba wayo kwisibonakaliso se-libra (♎︎), isondo, iminqweno yayo ibonakale ngokusebenzisa uphawu lwe-scorpio (♏︎), umnqweno. Oku kunxulunyanisiwe kwaye kusetyenzwe ziingcamango eziqhelekileyo zokuvusa ubomi, kwisibonakaliso sesiginali (♐︎), ingcinga, eqhubeka imini ukuya kuthi ga kumgaqo-nkqubo wokuzibandakanya kwengqondo ubuyela ngaphakathi kuye uyeke ukwazi Umhlaba. Oku kwenzeka kwi-capricorn (♑︎) yempawu, umntu ngamnye. ICapricorn (♑︎) imele imeko yokulala ubuthongo obunzulu kwaye nakwindiza efanayo nomhlaza (♋︎). Kodwa kanti i-capricorn (♑︎) imela ukungena kobuthongo obunzulu, umhlaza (♋︎) umele ukuphuma kwayo.
I-zodiac yokulala isuka kwi-capricorn (♑︎) ukuya kumhlaza (♋︎) ngendlela ye-aries (a). Imele indawo yokulala engabonwanga mntu, njengoko isiqingatha esisezantsi sezodiac simele indalo ebonakalayo yobomi bokuvuka. Ukuba umntu udlula kweli lizwe lingaphazanyiswa emva kokuba ethathe umhlala phantsi uyavuseleleka ngenxa yokuba ekule meko inzulu yobuthongo, ukuba udlulile ngendlela elungelelanisiweyo, ukuba unxibelelana neempawu eziphezulu kunye neempawu zomphefumlo kwaye zifumane. Imiyalelo ngabo bamenza ukuba akwazi ukwenza umsebenzi ngomhla olandelayo ngamandla ahlaziyiweyo kunye nochwayolo, kwaye uyaphumla ngokwenza ucalucalulo nangokungagungqi.
I-zodiac yokulala yimeko ye-noumenal; I-zodiac evukayo imele umhlaba omkhulu. Kwi-zodiac yobuthongo ubuntu abunakudlula ngaphaya kwekhonkrithi yomqondiso okanye ubuthongo obunzulu, kungenjalo kuya kuyeka ubuntu. Ihlala ikwisimo sokudakumba de ivuke kuwo umhlaza (♋︎). Ubuntu ke bufumana izibonelelo ezivela kwi-zodiac yokulala xa ubuntu buqu. Ubuntu buye bugxininise kubuntu zonke izibonelelo ezinokuzifumana.
Umntu oza kufunda i-zodiac yokuvuka kunye nokulala, siya kubhekisa kwimizobo edla ngokufakwa kuyo Ilizwi. Yabona Ilizwi, Umqu. 4, No. 6, Matshi, 1907, yaye Umqu. 5, No. 1, Epreli, 1907. Iimpawu ze30 kwaye 32 kufuneka bacingwe ngaphezulu, njengoko baya kuphakamisa iintlobo ezininzi kunye namanqanaba okuvuka kunye nokulala kwamazwe apho umntu ngamnye edlula khona, ngokokomelela komzimba wakhe, iimeko kunye nekarma. Omabini la manani amelwe ngamadoda amane, amathathu kuwo afakwe kwindoda enkulu. Esetyenzisiwe kumxholo weli phepha, la madoda mane amele imimandla emine edlulayo ukusuka ekuvuselweni kobuthongo obunzulu. Indoda encinci kunye neyokuqala yeyomzimba, ime kwi-libra (♎︎), othintelwe ngumzimba wakhe kwiplanethi ye-virgo-scorpio (♍︎-♏︎), ifom kunye nomnqweno, we-zodiac enkulu. Inqaku lesibini yindoda yengqondo, ngaphakathi ekukho umntu wenyama. Le ndoda ye-psychic imele imeko yephupha eliqhelekileyo. Le meko eqhelekileyo yamaphupha, kunye nendoda yengqondo, inikwe umda kwimiqondiso i-leo-sagittary (♌︎-the) yendoda yokomoya, kwaye imiqondiso yomhlaza-capricorn (♋︎-♑︎) yengqondo yengqondo, kwaye iku Lo mkhwa welizwe lemilingo ukuba umntu oqhelekileyo usebenzela ephupheni. Kule meko i-linga sharira, eyiyeyilo okanye ifomathi yomzimba, ngumzimba osetyenzisiweyo kwaye apho iphupha liye labonwa khona. Abo banamava kumaphupha bayaliqonda eli lizwe njengenye apho kungekho brillance okanye imibala eyahlukeneyo. Iifom ziyabonwa kwaye iminqweno iyavakalelwa, kodwa imibala ayikho kwaye iifom zibonakala ngathi zizo zonke ze-hue enye, enegrey grey okanye ifom ye-ashy. La maphupha ahlala ecetyiswa ziingcinga zosuku lwangaphambili okanye iimvakalelo zomzimba ngelo xesha. Imeko yephupha lokwenyani, nangona kunjalo, ifanekiselwa yile nto sinayo, kumanqaku ekubhekiselwe kuwo ngasentla, abizwa ngokuba yindoda yengqondo. Indoda yengqondo kwi-zodiac yayo yengqondo iqulethe amadoda e-psychic kunye nawomzimba kwii-zodiacs ezichaphazelekayo. Indoda yengqondo kwi-zodiac yayo ifikelela kwindiza ye-leo-sagittary (♌︎-♐︎), ingcinga yobomi, ye-zodiac enkulu. Oku kwindiza yomhlaza-capricorn (♋︎-♑︎) we-zodiac yokomoya, eboshwe ngumntu ophakathi ngokomoya. Yile ndoda yengqondo ebandakanya kwaye ibeke imida kuzo zonke izigaba zobomi bamaphupha afunyenwe yindoda eqhelekileyo. Kuphela phantsi kweemeko ezingaqhelekanga apho umntu afumana unxibelelwano oluqinisekileyo oluvela kwokomoya. Le ndoda yengqondo ngumzimba wamaphupha oyinyani. Kuyinto engacacanga emntwini oqhelekileyo, kwaye engachazwanga kubomi bakhe bokuvuka, kunzima kuye ukuba asebenze kuyo ngesazela nangengqondo, kodwa ngumzimba apho adlula khona ixesha lezulu lakhe emva kokuba efile.
Ngophononongo lwe amanani angama-30 kwaye 32, kuya kubonakala ukuba unxantathu we-angle e-invernt-ekunene usebenza kuyo yonke i-zodiacs, nganye ngohlobo lwayo, kodwa ukuba imigca (♋︎-♎︎) kunye (♎︎-pass) idlula kuzo zonke i-zodiacs kwimpawu ezilinganayo. Le migca ibonisa ukunxibelelana kobomi bokuvuka kunye nokuhamba kwayo, ukungena emzimbeni kunye nokushiya kwawo. Amanani acebisa okungaphezulu kunokuba kunokutshiwo ngabo.
Lowo uya kuxhamla kubuthongo-obuya kuxhamla ekuphenduleni ubomi bakhe bonke uya kuba ulungile ukuba ashiye imizuzu elishumi elinesihlanu ukuya kwiyure yokucamngca ngaphambi kokuba athathe umhlala phantsi. Kwishishini lendoda kungabonakala njengokuchitha ixesha lokuthatha iyure yokucamngca, ukuhlala phantsi kangangemizuzu elishumi elinesihlanu kungangaphezulu, kodwa yona le ndoda ingacinga ngemizuzu elishumi elinesihlanu okanye iyure kwiholo yemidlalo kufutshane kakhulu kuye ukuzonwabisa ngokuhlwa.
Umntu unokufumana amava xa ecamngca ngokudlula kwezo azithandayo kwindawo yemidlalo yeqonga, njengoko ilanga liphuma kwisibane ukukhanya kwesibane seoyile. Ngokucamngca, nokuba yimizuzu emihlanu okanye iyure, umntu makabuyekeze kwaye agwebe isenzo sakhe esingalunganga, aze ayale okanye ezinye izinto ezinjengomso ngengomso, kodwa avume ezo zinto zenziwe kakuhle. Emva koko ke mawalathise umzimba wakhe kunye nomgaqo wayo wokuzigcina ebusuku. Makayiqwalasele nokuba ithini ingqondo yakhe, nokuba iyintoni na imigaqo eyaziwayo. Kodwa makenze isigqibo kwaye azimisele ukuba nolwazi kumaphupha akhe onke, nasekulaleni kwakhe; kwaye kuzo zonke izinto makenze isigqibo sokuba aqonde, ngalo mgaqo wakhe wokuqonda, kwaye ke ngalo mgaqo wakhe wokufumana ulwazi — Ukuqonda.